🥇 ▷ Sawirradii ugu horreeyay ee la xado ee Google Pixel 3 XL ayaa soo socda: waa nabad galyada panda, soo dhowow polar bear! ✅
Sawirradii ugu horreeyay ee la xado ee Google Pixel 3 XL ayaa soo socda: waa nabad galyada panda, soo dhowow polar bear!
Google waa quruxsan yahay kaalay Qaabka naqshadeynta iyo soosaarka ee Pixel 3 cusub hadda waa u muuqda qof walba, iftiinka kuwa badan xanta waa daadinta in muddo ah oo inbadan sii xoogaysanayay. Laakiin horay u arag a tusaalayaal Hilibka iyo dhiigga, malaha dhowr bilood oo faro badan ka dib markii la bilaabay, ayaan ahayn wax si sahal ah loo saadaalin karo.
Halkii halkan waa sax Pixel 3 XL ee hore darbo nool, ayaa sheegay qof adeegsada madasha XDA, kaasoo si uun nasiib ugu yeeshay inuu gacantiisa ku haysto. Qalabku wuu leexanayaa shaqeeyasidaa daraadeed kaliya maahan su’aal jees jees, laakiin waa unug pre-soosaaray oo buuxa. Nasiib darrose, ma sameeyo kabaha, sidaa darteed suurtogal ma ahan in la sii baaro qalabka (kaliya xusuusta ayaa la ogaadaa 4/64 GB) iyo softiweer.
AKHRISO: Sikastaba Pixel 3: bilowga sidoo kale saldhig u ah ku dallacsiinta ku-dallaca wirelesska ee Caawiyaha?
Halkii waxa suurta gal ah waa in la isbarbar dhigo naqshadeynta iyada oo macluumaadka illaa iyo hadda sii daatay, iyada oo xusid mudan taas isku dheji ku dhowaad dhammaataan. Dhanka hore, halkan waxaa aad looga dooday feejignaan iyo aflagaadada stereo double, halka gadaalna ay jiraan hal sawir oo sawir ah iyo akhristaha faraha. Sidoo kale ogow midabaynta wadarta cad, kaas oo ka tagaya isku-dheellitirka summada leh ee u dhexeeya galaaska madow iyo rinjiga bir-cad – si xamaasad leh ayaa loo yaqaan Panda – kaas oo lagu gartay jiilkii hore ee Pixels (oo aad ku aragtid sawirka furitaanka). Sida laga soo xigtay xanta hase yeeshe, ma noqonayso midabka keliya ee la heli karo bilowga.
Dhanka: Booliska AndroidXigasho: XDA Forum